Kedu ka B2B Social Media Strategy gị si dị iche na B2C Strategy | Martech Zone
Etu esi agbadoro B2B Social Media Strategy ga esi dị iche na B2C Strategy
Bọchị Sọnde, Machị 27, 2016 Bọchị Sọnde, Machị 27, 2016 Douglas Karr
Ka ị na-aga n'ihu na-agụ banyere usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ntanetị, ọtụtụ n'ime ihe ọmụma maka atụmatụ mmekọrịta mmadụ na-elekwasị anya na azụmaahịa na-azụ ahịa (B2C). Mana enwere nnukwu esemokwu dị n'etiti atụmatụ B2C na Business-to-Business (B2B). Ka anyị tụlee ụfọdụ n’ime ha:
Onye Mere Mkpebi - ebe mkpebi ịzụta B2C nwere ike ịnwe oge dị mkpirikpi ma dabere na onye zụrụ ya ma ọ bụ di na nwunye na-azụ ihe, mkpebi azụmaahịa na-enwe ọtụtụ ọkwa ihu ọma na ịzụta ogologo oge.
Results - mgbe onye na-azụ ahịa mere mkpebi nzụta na-adịghị mma, ntaramahụhụ ahụ dị iche na azụmaahịa. Onye ọchụnta ego nwere ike tufuo ntụkwasị obi nke njikwa ha, nwedịrị ike tufuo ọrụ ya, wee tufuo ego ma ọ bụ uru ya ma ọ bụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ ọ bụla.
Mpịakọta - ebe oke uru nwere ike ịdị otu, olu dị mkpa iji zute ebumnuche ahịa na-adịkarị iche. Ndị na-azụ B2B na-arụkarị ọrụ na obere obere, atụmanya dị ukwuu maka atụmanya.
talent - obere ịzụ okirikiri na nnukwu mpịakọta chọrọ nnukwu ahịa na mgbasa ozi. B2B chọrọ nnukwu ahịa na mgbasa ozi, mana ọbụlagodi nke a chọrọ ndị ahịa dị egwu ịjụ onye na-ere ma nyere ha aka. Ma ọ bụghị naanị ire ere ahụ, kama na-enyere ha aka na mbọ ahịa ha niile. Ndị na-azụ ahịa ndị ntụkwasị obi na ndị ndụmọdụ na ụlọ ọrụ ha bara uru na-enwe ọganiihu.
a ederede sitere na Sprout Social na-akọwa ọtụtụ ụzọ dị mkpa iji tinye nke ọma B2B elekọta mmadụ media atụmatụ.
Maka ebumnuche ụfọdụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B gbalịsiri ike ịghọta azụmaahịa mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ na-eleghara ya anya. N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ B2C hụrụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ụlọ ọrụ B2B ka na-adabere na usoro ọdịnala dịka ịkpọ oku oyi na ịga oriri na nkwukọrịta azụmahịa. Tactzọ ndị ahụ ka dị ire, mana ekwesighi iji ha rụọ ọrụ na ntanetị. Kama, ikwesiri ijikọ usoro mmekọrịta gị na atụmatụ gị maka nsonaazụ kacha mma. Dominique Jackson, puo Social
Kedu ka Usoro B2B Social Media gị kwesịrị isi dị iche?
Goals - ebumnuche nke atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta B2B na-elekwasị anya na olu, okporo ụzọ, ndu na ntụgharị. Usoro ndị na-azụ ahịa ga-elekwasị anya na ịmepụta aha, uto ndị na-ege ntị na mmetụta. Na ndị ọzọ… ezubere iche vesos.
Strategy - ọdịnaya, nkwalite, na nchịkọta ndị a bụ isi atụmatụ B2B na-elekọta mmadụ mgbasa ozi. Usoro ahia nwere ike ilekwasị anya na iguzosi ike n'ihe, ọrụ ndị ahịa na iwulite obodo.
content - E mepụtara ọdịnaya B2B ịkụziri na imetụta ndị na-ege ntị nke ụlọ ọrụ ahụ iji wulite ntụkwasị obi na atụmanya. A na-eji usoro ịzụ ahịa iji wuo njirimara ahụ ma bulie obodo ha n'ịntanetị.
Tags: b2bb2b elekọta mmadụ media azumb2b vesos b2c social mediab2cb2c usoro mgbasa ozi mmekọrịtaonye na-eme mkpebiDominique Jacksontalent ahịansonaazụ mgbasa ozi mmekọrịtansonaazụ mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozina-elekọta mmadụ na-ereatụmatụ ire erepuo na-elekọta mmadụ